Goobaha Khadka Tooska ah ee Reer Brazil - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ... Ma sahlana in lagu soo galo qamaarayaasha reer Brazil. Ilaa 1946, noocyada ugu badan ee khamaarka waddanka waa la oggol yahay. Si kastaba ha noqotee, markii uu xukunka la wareegay madaxweyne cusub Dutra, dhammaan khamaarka dhaqameed iyo madadaalada khamaarka, oo ay ku jiraan sharadka isboortiga, waxaa la saaray mamnuuc. Marka laga reebo waxaa la oggol yahay oo kaliya sharad lagu tartamo faraska iyo bakhtiyaa-nasiibka. Tan iyo markaas, wax yar ayaa is beddelay, oo xaddidaadaha ayaa wali xaddidaya kuwa ciyaara.
1960-yadii, dowladdu waxay awood u yeelatay inay qaado isku day guul ah oo lagu xirayo dhammaan casinos-yada sharci darrada ah. Nasiib wanaagse, laga soo bilaabo markii 1990-kii laga mamnuucay mashiinnada ciyaarta, maantana waxaa jira in ka badan 100,000 oo kumanaan kun oo shirkado bingo ah. Buugyarahayaga khamaarka ee internetka ogow in ciyaaraha bingo sidoo kale sharci ka yihiin Brazil. Si kastaba ha noqotee, si ku meelgaar ah ayaa loo mamnuucay 2004. Fadeexada ku saabsan mowduuca laaluushka ee ku lug leh mamnuucida bingo ee 9 bilood.
In kasta oo xaqiiqda ah in tixraaca gaarka ah ee khamaarka internetka (sida lagu sheegay sharciga ee 1946 goobaha shaqsiyadeed ee khamaarka internetka ee Brazil, khamaarka internetka ee isboortiga iyo bingo online), hase yeeshe madadaalada noocaas ah ee internetka ee Brazil waa mamnuuc. Khamaarista dadka reer Brazil way ku ciyaari karaan khadka tooska ah, laakiin tan waa inay u adeegsadaan xariirka shisheeye sida sharciyada qamaarka internetka ee Brazil, ha mamnuucin adeegsiga boggaga ajaanibta ka shaqeeya.
Sannadkii 2012, Guddiga Sayniska, Teknolojiyada, Cusbooneysiinta iyo Isgaarsiinta ee Golaha Guurtida waxay soo bandhigeen soo jeedin lagu joojinayo dhammaan macaamillada kaararka deynta ee goobaha khamaarka laga ciyaaro ee ku yaal Brazil, taas oo aan u oggolaan doonin ciyaartoy maxalli ah inay ku raaxaystaan ​​adeegyada khamaarka ee internetka. Si kastaba ha noqotee, arrintan wali waa la tixgelinayaa. Waqtigan xaadirka ah, ciyaartoyda Brazil waxay sii wadaan inay ku sharxaan khadka tooska ah ee shirkadaha ajaanibta ah, qaar ka mid ah xitaa waxay leeyihiin nooc Boortaqiis ah oo ku yaal bogaggooda. Ilaa hadda, suuqa khamaarka internetka ee Brazil waa 265 milyan oo doolar.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Brazil, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Eeg liiska boggaga internetka ee turubka ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Brazil, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Ku raaxayso kala duwanaanshaha badan ee roulette, blackjack, hold'em, iyo ciyaaraha kale ee kaararka. Wixii macluumaad dheeraad ah, akhri dib u eegistayada boggaga turubka ee aqbalida ciyaartoy ka socota Brazil.
Eeg liiska boggaga sharadka internetka ee isboortiga, ka qaadashada ciyaartoy ka socota Brazil, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Dhig khamaaristaada, dooro waxa ugu habboon Dhacdooyinkaaga koeffitsinty oo ka mid ah soo-jeedinta dhowr dersin buug-sameeyeyaal khadka tooska ah ka sameeya Brazil. Iyo wixii macluumaad dheeraad ah, tixraac dib-u-eegistayada goobaha qamaarka ee khadka tooska ah laga ciyaaro ee isboortiga, adoo ciyaartoy ka soo qaadaya Brazil.
ugu fiican bet Craps